မြန်မာ့ပထမဦးဆုံး စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်မည်၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသာ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည့် Clash of Robots ပြိုင်ပွဲတွင် တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂ဝ နှစ်အတွင်း ကျောင်းသား လူငယ်တိုင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်အထိ စတင်စာရင်းပေးသွင်း လျှောက်ထားနိုင် ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ WYTU Science& Research Club နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA)တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် MICT Park, Conference Hall ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
”ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်ပြီးတော့ ကျင်းပမယ့်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ အဖွဲ့ ၂ဝ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ် ၁၂ဝ လောက်ခေါ်မယ်။ ဗျူဟာရယ် ဒီဇိုင်းရယ်ကို သူတို့အဓိကထား စဉ်းစားရမယ်။ ရန်ကုန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အစိုးရကျောင်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၂ဝ နှစ်အထိ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့်ပွဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ည ၇ နာရီမှာနေ စပြီးတော့ စာရင်းသွင်းတာ စခေါ်မယ်။ မေးခွန်းတွေ မေးထားမယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေဖြေနိုင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်သွားမယ်။ တစ်လလောက် အချိန်ပေးပြီး သူတို့ကို စက်ရုပ်ဆင်ခိုင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု WYTU Science& Research Club ဥက္ကဋ္ဌ မောင်ဟိန်းထက်က ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၃ ရက် ည ၇ နာရီမှစတင်၍ https://www.facebook.com/Clash-of-Robots-278231492930366/ သို့ စာရင်းစတင် ပေးသွင်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ည ၁၂ နာရီတွင် စာရင်းပိတ်မည် ဖြစ်ကာ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား သုံးမျိုးယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆုကြေးများ အပြင် ပညာသင်ဆုများလည်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ပြိုင်ပွဲသုံးခုပါမယ်။ (၁) စက်ရုပ်တွေကို စက်ဝိုင်းအတွင်း ထည့်ထားပြီး တိုက်ထုတ်ရမယ်။ (၂)စက်ရုပ်နဲ့ အမှိုက်ကောက်တာ ပြိုင်ရမယ်။ (၃) Racing Arduino Board ပြိုင်ရမယ်။ လမ်းကြောင်း ခက်ခဲတာကို ဖြတ်ကျော်ရမယ်။ပြိုင်ပွဲပထမရတဲ့ရော၊ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းရတဲ့သူရော၊ လူကြိုက် အများဆုံးဆုရတဲ့ သူတွေရော ဆု ပေးသွားဖို့ရှိတယ်။ ပညာသင်ဆု တွေပါပေးမယ်။ စက်ရုပ်ပြုလုပ်တဲ့ သေတ္တာလည်း ပေးလိုက်မှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
Clash of Robots ပြိုင်ပွဲဖြစ် မြောက်ရန် ကူညီပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစုငြိမ်းကလည်း ”ပြိုင်ပွဲက တက္ကသိုလ် ပေါင်းစုံကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပြိုင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က စာသင်ခန်းထဲကနည်းပညာရယ်။ အပြင်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာရယ် ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတာ လက်တွေ့လေးတွေ ပါပါသွားတာ။ လက်တွေ့အသုံးချတဲ့ဟာပါလို့ ကျွန်တော်တို့လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျောင်းတွေထဲမှာ ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသွားရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ ပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းအနေနဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအတွက် စပွန်ဆာတွေ ကူရှာ ပေးမယ်။ အသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လုပ်တာဆိုတော့ ဌာနဆိုင်ရာ တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ ခန်းမနေ ရာတွေ ဆုပေးပွဲကျင်းပမယ့် နေ ရာတွေကို ထောက်ပံ့မှုရရှိအောင် ကျွန်တော်တို့အသင်းက ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် စက်ရုပ်များပြုလုပ်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများတွေ့ရှိပါက WYTU Science& Research Club သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်း ခံနိုင်ကြောင်း supervisor မောင် ပြည့်စုံဆက်က ပြောပြခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကMICT Park Building 14 ၊ ကနောင် Hub တွင် ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ သန္ဓေနှင့် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အတွက် မီးငြှိမ်းသတ်ရေး??
တပ်မတော်အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆီသို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယ